CHERRY "PUTINKA": SIFOOYINKA IYO SHARAXAADA KALA DUWAN, SAWIR - CHERRY
Kala duwanaanshahan waxaa loo tixgeliyaa dhalinyaro - waxaa la soo saaray sanadka 2013. Dhab ahaantii, waa isku-dhafka "line Venyaminova" iyo "Anthracite". Xulashadani waxay bixisay natiijooyin wanaagsan, oo hadda aad aragto.
Cherry this waxaa lagu kala soocayaa sifooyinka soo socda:
dhererka ilaa 3 m iyo heerarka koritaanka dhexdhexaadka;
cufnaanta celceliska cufnaanta. Waxay u egtahay in loola jeedo iyo "oohin";
waxay dhaleen caleemo bunni ah oo bunni ah oo yar yar. Daaqadahooda oo dhammu waxay hor yaalliin indhahooda.
caleemo cagaaran oo cagaar ah oo leh qoyan matte iyo lakabyo la dareemi karo. Foomka - cidhibtirka, oo leh jilcan siman oo ku qoran talooyinka;
taarikooyinka saxda ah ee daboolan. "Down" ayaa maqan;
burooyinkeeda dalladda leh ubaxyo caddaan iyo casaan ah oo cabbirka dhexdhexaad ah.
Waa muhiim! Marka laga beerto geedo noocan oo kale ah, godad laba jibbaaran ayaa lagu qodaa dhinacyada 60 cm. Superphosphate (1 kg), lime dabacsan (1 koob) iyo 2 baaldiyo of humus qudhuntay ayaa la dhigay layers hoose. Laakiin digada cusub iyo cagaarka ayaa ka horjeeda.
Ogsoonow in noocyada kala duwan ee loo yaqaan 'number of self-fruited' (taas oo ah, waxay ku haboon tahay goobaha guriga ee noocyada pollinator soo koraya). Haddii ay ka qaybgalaan, kaliya rubuc ka mid ah tirada suurtagalka ah ee ubaxa waa la xidhayaa.
Fiiri noocyada ugu weyn ee jeeriga.
"Putinka" waa mid aad u-badan, iyo nooca berry ay yihiin hal-cabbir. Celceliska miisaanka waa 5.5-5.6 g, laakiin badanaa u kaco 7 g.
In muuqaalka, waxay si ballaaran loo soo koobay, iyo midabka ay yihiin guduud mugdi (tone wuxuu ku dhow yahay maroon qani ah). Maqaarka saafiga ah waa mid dhexdhexaad ah.
Hilibka casaanka madow waa mid aad u casiir leh. Cuntada dhadhanka ah iyo dhadhanka caadiga ah ee jiirka ayaa lagu kala soocaa astaamaha miisaanka ("dufka") ayaa dareemay waxoogaa daciif ah marka loo eego noocyada kale). Dhexdhexaad dhexdhexaad ah oo lafta wareegsan leh dusha si siman u kala soocaa saxarka. Muuqaal kale oo ka mid ah miro - tiro yar oo dhibco subcutaneous, kuwaas oo ku dhowaad aan la arki karin.
Sida ka kooban halbeega, nooca berry ah waxaa ku jira 10-10.5% sonkor iyo 1% oo ah asiidh ammaato ah. Wadar ahaan walxo kale oo qallalan (dambas, xajmiga cuntada iyo fiitamiinada) qaybtoodu waxay gaadhsiisaa 17% wadarta guud.
Iyada oo ay ugu wacan tahay "dhalinyaradooda", xariiqan waxay keenaysaa xiiso sii kordhaysa ee bannaanka ujeedada. Mid ka mid ah su'aalaha ugu muhiimsani waa sida geedka jiilaalka.
Dhibaatada jiilaalka iyo iska caabinta cudurada
Kala duwanaanshaha guud ayaa loo tixgeliyaa sida caadiga ah jiilaalka jilicsan. Waxaa ugu fiican ee loogu talagalay jiilaalka gobollada diiran.
Ma taqaanaa? Miraha mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee jeeriga - Japanese sakura - dhab ahaantii waa la dabacsanaan.
Meelaha leh jawi aad u daran, keliya dhirta geedka ayaa isku mid ah - burooyinkeeda ubaxa waxay noqotaa mid dhexdhexaad ah (waxay u nugul yihiin isbedelka cimilada iyo heerkulka).
Faa'iidada cad waa iska caabinta cudurada iyo cayayaanka. Lafaatiirta waxaa lagu cabsiin karaa cudurada fangas sida moniliosis iyo cocomycosis (nasiib wanaag, tani waa dhif). Xayawaanku waxay u nugul yahiin moniliosis, oo leh xayawaan, xaaladuna waa isku mid: Dhicis, weelils ama sawflies muuqan mooyaane haddii ay dhacdo in cudurkeenaha guud ee geedaha dariska ah.
Doorashada noocyo cherry ah ee beerto ee goobta, waxaan kugula talinaynaa inaad si aad u ogaato niyadda u leh kordhinta noocyo kala duwan: Vladimirskaya, Molodezhnaya, Ashinskaya, Black Large, Precious Carmine, Lyubskaya, Morozovka, Ural Ruby , "Shpanka", "Turgenevka".
Bisaylka iyo dhalidda
Iskudhinta dadku waxay bilaabmayaan sanadka afaraad ka dib marka la beero.
Waiting waxaa si buuxda loo abaalmariyaa: celcelis ahaan, 8 ton ayaa laga saaraa 1 ha arruur, iyo 12 tan oo miro ah ayaa laga saaraa carrada fiican.
Berry oo la goostay waxaa loo isticmaalaa ujeedooyinka soo socda:
sida faaruqinta qalajinta;
ilaalinta (casiir, jaanyeer, kaydka);
sida buuxinta buraashka iyo keega-casseroles iyo pies, pies iyo keega, iwm.
inta lagu jiro diyaargarowga dabka, khamriga, tinctures iyo khamriga kale ee khamriga lagu isticmaalo tiknoolajiyada guriga;
laakiin taasi ma ahan dhammaanteed - jeeriga mugdiga ahi waa mid aad u fiican in la sameeyo marshmallows, qaar ayaa la qalajiyaa foornada ama lagu daraa hilibka (sidaa daraadeed qiiqgu wuxuu helayaa caraf udgoon).
Sida aad arki karto, miraha waa run ahaantii waa mid caalami ah waxayna awoodaan inay qurxiyaan waxyaabo badan oo ka mid ah menu.
Baro sida loo sameeyo jeeriga xilliga qaboobaha: sida loo qalajiyo loona xakameeyo jeeriga, sida loo sameeyo miro-cherry, marka la ururiyo iyo sida loo qalajiyo caleemaha cherry ee shaaha.
Waxaan ogaanay waxa ay cherry "Putinka" u taagan tahay, iyo calaamadaha calaamadahaan la aqoonsan karo. Waxaan rajeyneynaa in xogahani ay ku qori doonaan akhristeyaashayada waxaanan gacan ka geysan doonaa sidii aan u samayn laheyn doorasho kala duwan ee noocan oo kale ah jeeriga.